नेपालको डान्स भारतकै लेभलमा पुराउँछु : तेरिया-Nagarikaawaj.com
नेपालको डान्स भारतकै लेभलमा पुराउँछु : तेरिया
नचिन्ने को छ यहाँ । के गाउँ, के शहर, के नेपाल भर के भारतभर । लगभग विश्वभर उनले एकपटक आफुलाई नचनाएकी छिन् । डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स ‘सिजन थ्रि’ की विजेता हुन्, तेरिया फौजा मगर । डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स ‘सिजन थ्रि’ जितेर यतिबेला आफ्नै घरमा आराम गरिरहेकी सामान्य परिवारकी ११ वर्षिय तेरियाले भारतीय भूमिमा डीआईडी लिटिल मास्टर्सको उपाधि उचाल्दा लाखौं नेपालीले गर्वको महसुस गरे । उनको वुवा, आमा, हजुरवुवा , उनको गाउँ, जिल्ला हुदै नेपालको नाम समेत विश्वभर फैलीयो । अनुशासीत एउटी नेपालकी यि छोरीको डान्सले नेपालले पनि एकपटक घमण्ड गर्न पाएको छ । हामीले घमण्ड गर्न पाएका छौं । जितपछि नेपाल आएकी तेरियासँग रामजी ज्ञवालीले जितसम्म आउँदाका विभीन्न क्षणवारे कुराकानी गर्नुभएको छ । संः
डीआइडी लिटिल मास्टर्सको उपाधि जितेपछि कस्तो लाग्दैछ ?
– राम्रो लाग्दैछ, म डिआईडी लिटील मास्टर्स सिजन–३ को विजेता वन्न सफल भएकी छु । आफ्ना आफन्तहरु, गाउँ, समाज टोल तथा समग्र विश्वभरी रहनुभएका नेपालीहरुको मायाँले र निरन्तर भोटको कारणनै म यो जित पाएकी हुँ । मेरो प्रयासले मात्रै केही हुदैनथियो जितका लागी । जव म ईण्डियावाट नेपाल आए आउनासाथ सम्पुर्ण आमावुवा, दिदीवैनी, दाजुभाई मलाई भेट्न आउनुभयो । झन खुसी लाग्यो अहिले । मलाई भेटेर सम्मान दिईरहनुभएको छ । मेरो लागी सवैले कति गर्नुभएको रहेछ यहाँ आएर मात्रै थाहा पाए । धेरै खुसी छु । म डिआइडी लिटील मास्टर्सका लागी त्यहाँ रहदाँ विजयी भएको र त्यहाँको वारेमा मात्रै थाहाँ हुन्थ्यो, अरु थाहा हुदैनथियो । तर के कसरी यहाँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, विश्वभर सहयोग गर्नुभएको रहेछ केही थाहा हुदैनथियो । जुन कुरा म यहाँ आएपछि मात्रै थाहा पाएकी थिए । सवै सवैको सहयोग मिल्यो मेरो जितका लागी । मिडीयाहरुले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । अन्र्तवार्ता, समाचारहरु पत्रपत्रीका टेलिभीजनहरुमा लिईरहनुभयो । देशैभरीका हरेक जसो मिडीयाले मलाई साथ दिएको पाए । मिडीयाको सहयोगले पनि म यहाँ सम्म आएकी हुँ जस्तो लाग्छ ।
डिआईडी लिटील मास्टर्सको कार्यक्रमवारे कसरी थाहा पायौं र कसरी त्यहाँ पुग्यौ ?
– मैले डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टर्स पहिला देखीनै हेर्थे । निकै मन पनि पथ्र्यौ । सोच्थे त्यहाँ जान पाए कस्तो हुदो हो ? अझ विजयी हुन पाए त झनै कस्तो हुँदो हो ? लिटील मास्टर्सका लागी विभीन्न ठाउँमा अडिसन भएको जि टिभीमा देखे । टिभीको तल अडिसनको वारेमा दिईरहेको थियो । अनि मैले मम्मीलाई अनि हजुरबुवालाई भने मम्मी अडिसन रहेछ एकपटक भएपनि प्रयास गर्छु न पिलीज पिलीज भने । पहिला मम्मीले छोरी तिमी सक्दिनौ क्यारे । गाह्रो हुन्छ क्या रे भन्नुहुन्थ्यो । मैले मम्मीको कुरा काटेर भएपनि कर गर्थे । मम्मी हजुरले नदिएपनि एकपटक म मेरो मिहेनत खर्चीएर जसरी भएपनि अडिसनमा जान्छु भनेर एकदमै कर गरेपछि मान्नुभयो । हजुरबुवाले पनि धेरै साथ दिनुभयो । उहाँहरुकै कारणले म डीआइडीमा भाग लिनका लागि पुग्न सकेँ । हजुरबुवाले र मम्मीले भारत र यहाँ धेरै मानिसहरुसँग कुरा गर्नुभयो । मेरो हजुरवुवा र ड्याडीको पनि सपना थियो मैले त्यहाँ नाचोस भन्ने । उहा“हरुको सहयोगमा म त्यहाँसम्म पुगेकी थिए ।
डीआईडीमा जादाँ जित्छु नै भन्ने लागेको थियो?
– नाई नाई विजयी हुन्छु भन्ने त लाग्दैनथियो । विजयी भन्ने कुरा सोचेकै थिईन । वरु टप १० सम्म भने सोचेकी थिए । त्यसो त मलाई मेरो डान्समा विश्वास त थियो तर यसरी पूरै प्रतियोगिता जित्छुजस्तो लागेकै थिए । अडिसनमा सेलेक्ट भएपछि टप १० र ग्राण्ड प्रिमीयर सम्म पुगेपछि केही डर भने अनुभव भएको थियो । सवै साथीहरु टे«निङप्राप्त, अलिक वढि जान्ने जस्तो देखिन्थे । तर, मैले धेरै मेहनत गरे । केही त्यस्ता क्षणहरु पनि छन्, जतिवेला रातदिन केही नभनीकन नाच्थे । धन्न मैले आफुलाई घमण्ड गरेर जसरी त्यहाँ गएकी थिए त्यस्तै खालको रिजल्ट पनि पाए । थ्याकं यु गड ।
विजयी भएको घोषणा गर्दा कस्तो लागेको थियो ?
– सकिङ । एकदमै सकिङ । मलाई विश्वासै लागेन म विजयी भए भनेर । कस्ती भएकी थिए त्यो अवस्थामा मैले आफैलाई भन्न सक्दिन । तिन चार दिन दिनसम्म मैले मम्मीलाई सोधीरहे, ‘मम्मी म विजयी भएकै होर ?’ सपना जस्तो लाग्यो त्यसपछि केही दिनसम्म । मम्मीलाई सोधेर हैरान पार्थे मम्मीले हो के भनेर थाक्नुहुदैनथियो । म यहि प्रश्न पटक पटक सोधीरहन्थे ।
अव भविष्यमा के वन्ने लक्ष्य राखेकी छौं ?
– मैले पहिलादेखी नै एउटा सपना राखेकी थिए । सफल कोरीयोग्राफर बन्छु भन्ने । तर अहिले म जसरी यो जित हासील गरेकी छु अव चाहि बन्नैपर्छ जस्तो भयो । एउटा सफल कोरीयोग्राफर अनि राम्रो कलाकार वन्ने सपना अहिले आएर वुनेकी छु । चाडै नै त्यो स्थान पनि पक्का गर्छु ।
नेपालको डान्स क्षेत्रले अव तेरीयाको कस्तो सहयोग पाउँछ त ?
– म पहिला राम्रो कोरीयोग्राफर वन्छु । त्यसपछि नेपालमा आएर निरन्तर लाग्छु र प्रयास गर्छु कि नेपालको डान्स क्षेत्रलाई भारतको लेभलमा पु¥याउनका लागि । हामीले जति नेपालका हेरेका छौं वुझेका छौं यो डान्स विकसीत मुलुकका अगाडी केही पनि हैन ।
शुरुमा गाउँको क्षण, डान्स सिक्दै अगाडी वढ्दाको क्षण सम्झिदा कस्तो लाग्छ ?
– गाउँघरमा कसैको बिहे हुँदा पन्चेवाजा बजेको सुनेँ भने, कहि कतै नाच भयो भने दौडिहाल्थे । घरमा कसैलाई पनि नसोधीकन जान्थे । मेरो डान्स मन पराएर घरमा कुरा गर्दा वल्ल मम्मी, वुवाहरुले थाहा पाउनुहुन्थ्यो । तिमी त्यहाँ गएको रहेछौं है भन्नुहुन्थ्यो । गाउँघरमा जव म भैलो देउसी अथवा हरेक जसो हुने कार्यक्रममा नजादाँसम्म केही शुरु हुदैनथियो । भैलोदेउसीमा तेरिया आएर नाचे मात्रै पैसा दिन्छौं भन्थे । म एक्लै पनि नाच्दा १०, २० ५० हुदै ५ सयसम्म दिन्थे । म दुईवर्षअघि सम्म त्यत्तिकै नाच्थे भने त्यसपछि भने मम्मीले मलाई वागेश्वरी संगितालयमा डान्स क्लास लिनको लागी भर्ना गरिदिनुभयो । मलाई वागेश्वरी संगितालयले पनि एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ । त्यहाँका गुरुहरुले मलाई माथि पु¥याउन कति मिहेनत गर्नुभयो, कति सहयोग गर्नुभएको छ त्यो भन्न पनि सक्दिन । यहाँ क्लास लिदा जुन पनि कार्यक्रमहरु हुन्थ्यो मलाई एउटा पनि नछुटाईकन लैजानुहुन्थ्यो ।
यो ठाउँ सम्म आउनको लागी सवैभन्दा ठुलो श्रेय कस्को ?
– सबैभन्दा पहिला त मेरो परिवार नै हो । म गाउँघरतिर कुनैपनि कार्यक्रममा भए मम्मी, हजुरवुवा, वुवा जस्ले पनि लैजानुहुन्थ्यो । उहाँहरुले नाच्न र अघि वढ्न निरन्तर सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । म डिआइडी लिटील मास्र्टसका लागी जाने सोंच वनाउदै गर्दा गाउँघर अथवा धेरै मान्छेहरुले धेरै खर्च हुन्छ भन्दा मेरो आफ्नो वुवाले वरु यहाँवाट धेरै वर्ष नेपाल आउन किन नपरोस् छोरीको लागी खर्च गर्न सक्छु भन्नुहुन्थ्यो विदेशवाट । त्यसपछि हजुरबुवाले मलाई त्यो स्थानसम्म पुराउनुभयो । मेरो घरपरिवारले मलाई अवसर दियो, मलाई डीआइडीमा पुरायो र सबै देश विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले मलाई जिताउनुभयो । मलाई मन पराउनुभयो, मैले कहिल्यै पनि सोचेको थिइन कि मलाई नेपाली दाजुभाइहरुले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने । म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
तेरियासँग गरिएको कुराकानीको भिडीयो हेर्न तलको लिकं खोल्नुहोस्